Translate cross section of the main reli in Burmese
Results for cross section of the main relief ... translation from English to Burmese
the width of the main window in pixels.
ပင်မ window ၏ အနံကို pixels ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
ပင်မ window ၏ အမြင့်ကို pixels ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
save the positions and sizes of the main dialogs when gimp exits.
gimp ကို ထွက်ခွါတဲ့အခါ ပင်မ အညွှန်းစာမျက်နှာများရဲ့ တည်နေရာများနဲ့ အရွယ်အစားများကို သိမ်းဆည်းပါ။
shortly after, the app gotaspot on the “new and rising” section of the app store.
အဲဒါပြီး သိပ်မကြာဘူး ဝင်းဒိုးဖုန်းစတိုးရဲ့ "အသစ်နဲ့ အလန်း"ဇယားမှာ ကျွန်တော့် ပရိုဂရမ်က တစ်နေရာရခဲ့တာပဲ။
in the comments section of the above post it is revealed that his friends tried to locate shaheen who was supposed to reach dhaka, the capital byatrain by the evening.
အထက်​ပါ​ပိုစ့်​တွင် မှတ်ချက်​ပေး​ထား​သည်​များ​မှ တွေ့​ရ​သည်မှာ ၄င်း​၏​သူငယ်ချင်း​များ​သည် ညနေ​ရထား​နှင့် ဒါ​ကာ​မြို့တော်​ထံ လာ​မည်​ဖြစ်​သော ရှာ​ဟာန်း ရှိ​နေ​မည့်​နေရာ​အား သိ​နိုင်​ရန် ကြိုးစား​ခဲ့​ကြ​သည်။
the ngo lalana (roads in malagasy) alerted readers to the status of the rn2 highway linking the capital with the main port of madagascar toamasina : roads around the country are deteriorating.
နိုင်ငံ​တစ်​ဝန်း​မှာ​ရှိ​တဲ့ လမ်း​တွ​ကေ ပျက်စီး​ယိုယွင်း​နေ​ပါ​ပြီ။
သာဓကအားဖြင့်၊ အိတ်ဇိုရီဘိုနျူကလိစ် တည်ဆောက်ပုံမရှိသော ပရိုတိန်းသည် rna-ကိုမှီခိုသော rna ပေါ်လီမီရော့စ်ကင်းမဲ့နေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စိစစ်ပြင်ဆင်ပေးမှုအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ပုံတူပွားခြင်းတွင် ပိုမိုသော တိကျမှန်ကန်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ စုပေါင်းတည်ရှိမှု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များအနက်မှ တစ်ခုမှာ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆိုင်သော မျိုးပွားပစ္စည်းကို ပုံတူပွားရန်ဖြစ်ပါသည်။
2020 ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် sars-cov-2 ဗိုင်းရပ်စ်၏ အဓိက protease အင်ဇိုင်းအား ဖြိုခွဲရမည်ဟု ကူးစက်မှုနောက်ပိုင်းသုံးစွဲသည့် ဆေးဝါးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စိစစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
that is because ofasudden twist in the otherwise predictable plot of the country's domestic politics which sawanumber of high profile defections to the main opposition party, chama cha demokrasia na maendeleo (chadema), from the ruling chama cha mapinduzi (ccm). two former prime ministers, edward lowassa, the presidential candidate for the opposition bloc ukawa, (made up of four political parties, including chadema) and frederick sumaye, both left the comfort of the ruling party this summer.
ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ သာမာန်ဆိုလျှင် ခန့်မှန်းလို့ရမည့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံတွင် ရုတ်တရက် အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ အရေးပါသော နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်အချို့သည် အာဏာရ ပါတီ chama cha mapinduzi (ccm)မှ အဓိက အတိုက်အခံပါတီ chama cha demokrasia na maendeleo (အတိုကောက် - ချဒီမာ)သို့ ဘက်ပြောင်းသွားကြသည့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
nakakalamang ka na (Tagalog>English)täytäntöönpanoasetuksella (Finnish>Bulgarian)agradeceis (Portuguese>Arabic)voldoen (Dutch>Hungarian)tokuete tau (Maori>English)against (German>Danish)takaw sa pagkain (Tagalog>English)ciao mi xhiamo giandomenico (Italian>French)kopam in telugu mining (Telugu>English)rättfärdigt (Swedish>English)veroorloofd (Dutch>Hindi)helado (English>Spanish)what is your breast size dear (English>Portuguese)exceptional service (English>Tagalog)kokey (Tagalog>English)can you call you later (English>Telugu)interficerem (Latin>English)Καλλίστην είναι (Greek>Italian)quel musique aimez tu (French>English)he cries (English>Tagalog)nahshonit (Albanian>German)je suisse pas (French>English)תמיד (Hebrew>Thai)שלחנך (Hebrew>German)verdeckt liegend (German>English)